Vokatry ny vaksinin'ny COVID-19: Ny ilana tranokala fampahalalana natokana | Vaovao momba ny fahasalamana
Home » Vaovao momba ny fahasalamana » Vokatry ny vaksinin'ny COVID-19: Ny ilana tranokala fampahalalana voatokana
Vokatry ny vaksinin'ny COVID-19: Ny ilana tranokala fampahalalana voatokana
Mpanoratra Behrouz Pirouz
Ny taovan'ny vatan'olombelona dia mifamatotra, ary misy vokany tsy ampoizina amin'ny fanafody. Nitranga fa ny fanafody mahazatra izay amidy nefa tsy mila dokotera dia voarara tampoka manerantany.
Aiza no hahitana soritr'aretina tsy ampoizina voasoratra anarana aorian'ny vaksinin'ny COVID-19?
Efa ho 500 tapitrisa ny olona hatreto no nahazo ireo vaksinin'ny COVID-19 isan-karazany, ary 135 tapitrisa amin'ireo no nahazo ny fatra faharoa.
Ny fikarohana momba ny tranga mahazatra ary koa ny tranga tsy fahita firy dia zava-dehibe, indrindra ho an'ireo tranga ratsy indrindra, toy ny nitranga rehefa nisy ny fahafatesana sy ny trombosis herinandro vitsivitsy lasa izay nahatonga ny fampiatoana an'i AstraZeneca.
Toy izany ny tranga, ohatra, an'i Ranitidine, zava-mahadomelina malaza amin'ny heartster hita tamin'ny 1976 ary tamin'ny fampiasana ara-barotra hatramin'ny 1981 izay nangataka ny FDA ny fisintahana azy tamin'ny tsena herintaona lasa izay. Amin'ny tranga hafa, misy fanafody sasany navela ihany saingy ny fampiasana azy dia mitaky fitandremana manokana, toy ny amin'ny "Tamsulosin", fanafody mahazatra ho an'ny prostate izay mety hisy fiatraikany amin'ny maso, izay mitaky fitandremana manokana rehefa tsy maintsy misy ny marary mihinana azy. fandidiana katarakta na glaucoma.
Ireo zava-mahadomelina ireo dia tena ampiasain'ny ampahany kely amin'ny mponina. Na eo aza izany, ny fikarohana an-tranonkala ny voka-dratsin'izy ireo dia ho mora tohina ary koa ho an'ireo fanafody mitovy amin'ny fampiasana voafetra.
Ho an'ny vokan'ny vaksinin'ny COVID-19 dia tsy izany. Mety hahagaga izany, raha jerena fa ampiasain'ny ampahany betsaka amin'ny mponina tsy tambo isaina izy ireo, raha ny fahitana azy dia saika ny mponina eran'izao tontolo izao. Mazava ho azy fa misy ny fampahalalana nomen'ny mpamokatra, saingy izany dia mifototra amin'ny tranga ratsy nitranga nandritra ny fotoana fitsapana vaksinina. Ny haben'ny santionam-panandramana dia an'aliny vitsivitsy, filaharana lehibe kokoa noho ny olona 500 tapitrisa, izay nahazo ny vaksinin'ny COVID-19 samihafa, avy amin'izy ireo 135 tapitrisa no nahazo ny fatra faharoa nefa tsy nila nilaza fa mitombo isan'andro ireo isa ireo rehefa mandroso ny fampielezana vaksiny.
Ny fanitarana ny santionany dia ahafahana miseho ireo fiatraikany tsy fahita firy izay tsy nipoitra tamin'ny fizahana fitsapana. Ankoatry ny tranga ratsy mahazatra indrindra, ny vokatry ny tranga statistika ambany dia tsy maintsy tsikaritra ihany koa ary hohalalinina. Na eo aza izany, fizahana tsotra ao amin'ny motera fikarohana toa an'i Google izay mametraka fanontaniana toy ny hoe, "Aiza no mety hanoratako ireo soritr'aretina hafahafa taorian'ny vaksinin'ny COVID-19?" na "soritr'aretina tsy fahita taorian'ny vaksinin'ny COVID-19" dia mampiseho fa tsy misy tranokala toy izany izay mety hahitana soritr'aretina tsy ampoizina voasoratra anarana taorian'ny vaksinin'ny COVID-19.
Ny iray dia tsy mahita afa-tsy lahatsoratra vitsivitsy toy ny hoe "Inona avy ireo voka-dratsin'ny vaksinin'ny AstraZeneca?" "Inona avy ireo voka-dratsin'ny vaksinin'ny Pfizer?" Ny fijerena haingana azy ireo dia manamafy fa ankoatry ny soritr'aretina malaza indrindra, dia misy ihany koa ireo somary tsy fahita firy. Ohatra, olona 4 amin'ny 600 no naneho hevitra fa nanana olana tatavia taorian'ny fanaovana vaksinin'ny AstraZeneca, vokatra iray izay tsy voalaza ao anatin'ny lisitr'ireo olana mety ho hita nandritra ny dingana fitsapana. Misy zavatra mitovy amin'izany amin'ny vaksinin'ny Pfizer-BioNTech. Anisan'ireo fanehoan-kevitra mihoatra ny 200 momba ny voka-dratsiny, ny 2 amin'izy ireo koa dia mitatitra ny olan'ny tatavia, ary ny 15 kosa dia mitatitra ny fikolokoloana vatana izay amin'ny tranga sasany dia naharitra hatramin'ny 2 herinandro.